‘भोगिरहेको तर दृढतापुर्वक निरन्तर प्राथमिकताको साथ नउठाईएको समस्याहरु’ – News Portal of Global Nepali
‘भोगिरहेको तर दृढतापुर्वक निरन्तर प्राथमिकताको साथ नउठाईएको समस्याहरु’
03/05/2019 मा प्रकाशित
– कल्याण कुमार गुरुङ, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली काँग्रेस ।
नेपालको सबैभन्दा बिकास भएको स्थान भनौं वा नेपालको राजधानी काठमाण्डुको परिबेशलाई नियाल्ने हो भने यहाँ सुबिधाहरु कम र समस्याहरु धेरै देखिन्छन् । देशको राजधानी काठमाण्डुको त राम्रो बिकास भएको छैन, देशको अन्य ठाउको हालत कति दयनीय होला ? प्रसंग बिचारणीय र सोचनिय छ ।
काठमाण्डुको सबैभन्दा ठुलो र गंभिर समस्या भनेको खानेपानीको अभाव हो । दैनिक हरेक ब्यक्तिले भोगेको यो समस्या मेलम्चीको सपना देखेर सधैं ब्युझन्छ र खानेपानीको अभावको यथार्थलाई अनुभुति गरेर उदासिनतामा निदाउन विबस छ । खानेपानीको यो गंभिर समस्यालाई लिएर काठमाण्डुबासीले यदाकदा रित्तो गाग्रोको जुलुश प्रर्दशन गरेको देखियो । तर खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्चीको समस्या मात्र होईन, प्राथमिकता दिएर संसदमा यो समस्याको निरन्तर उठान हुनु पर्दछ, जुन खासैमात्रामा भई रहेको छैन । र खानेपानी अभावको यो गंभिर समस्यालाई लिएर आजसम्म संसदको बैठक अबरोध गरिएको छैन । किन ?
बेलैमा बुद्धि पु¥याएर निरन्तर काम गर्ने र कडा कानुन निर्माण गरि कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपाल र यसको राजधानीलाई प्रदुषण मुक्त बनाउन सकिन्छ । प्रदुषणलाई रोक्नको लागि एउटा निश्चित मापदण्ड तय गरि गाडि र मोटरसाईकललाई “ग्रीन स्टिकर”दिने कानुनी ब्यवस्था निर्माण गर्नु पर्दछ । कसैले पनि मापदण्ड बिपरित कुनै गाडि वा मोटरसाईकललाई “ग्रीन स्टिकर”दिएमा त्यस्तो कार्यलाई जघन्य अपराध सरह मानी सो कार्य गर्ने ब्यक्तिलाई आजिवन काराबासको सजाय दिने कडा कानुन ल्याउनु पर्दछ । मापदण्ड भन्दा बढी धुँवा उडने गाडि वा मोटरसाईकललाई चलाउन नदिने र कसैले “ग्रीन स्टिकर”नपाएको सबारी साधन चलाएमा उसको ड्राईभिङ लाईसेन्स खारेज गर्ने र सबारी साधन जफत गर्ने र साथै १० (दश) लाख रुपैया पनि जरिबाना गर्ने कडा कानुन संसदबाट ल्याउनु पर्दछ र त्यसको कडाईका साथ कार्यान्वयन हुनु पर्दछ । यो गंभिर बिषयमा संसदमा प्राथमिकताको साथ निरन्तर आबाज उठाएर संसद किन अबरुद्ध पारिन्दैन ?
सडक र पुलहरु जीर्ण भई सकेका छन् । सडकमा मानिस हिडनको लागि सडक छेउमा पेभमेन्ट छैन । अब सबै सडकहरुको डिजाईन गर्दा सडकको छेउमा मानिस हिडनको लागि कम्तिमा २४ फिटको पेभमेन्ट राख्नु पर्ने कानुनी ब्यवस्था गर्नु आबश्यक भई सकेको छ । पुलहरुको निर्माणको लागि डिजाईन गर्दा मानिस हिडनको लागि फराकिलो पेभमेन्टको अनिबार्य ब्यवस्था गर्ने कानुन ल्याउनु पर्दछ । सडक बिभागको कर्मचारीलाई कुनै मतलब छैन । कानुन मौन छ र कर्मचारीहरुको मौनताले त्यसमा निस्तब्धता थपेको छ । यस्तो गंभिर बिषय निरन्तर प्राथमिकताका साथ संसदमा उठनु पर्दछ । तर किन निरन्तर उठिरहेको छैन, यो गंभिर बिषय ।
सडक बरिपरि फोहोरको डंगुर हुन्छ । मानिसहरु घरको कौसीबाटै सडकमा वा घरको फोहोर सडकमा लगेर फ्याक्ने गरि रहेका छन् । हामी आफुलाई शिक्षित र सभ्य भन्छौं तर फोहोर सडकमा सदैव फ्याकि रहेको हुन्छौं । यसले सडक मात्र होईन, सम्पुर्ण शहर र बातावरण नै फोहोर र दुषित बनाई रहेको हुन्छ । ढल र फोहोर मैलाको ब्यवस्थापन हुन नसक्नु काठमाण्डु लगायतका सम्पुर्ण शहरी क्षेत्रको प्रमुख समस्या हो । यसैले जुन ब्यक्तिले सडकमा जथाभावी फोहोर फ्याल्छ, उसलाई कम्तिमा १० ( दश) लाख रुपैया जरिबाना गर्ने कडा कानुन संसदबाट पास गर्नु पर्दछ । ढल तथा फोहोर मैलाको ब्यवस्थापनको बिषयमा गंभिरतापुर्वक र प्राथमिकताकासाथ संसदमा निरन्तर आबाज उठाउनु पर्दछ ।
आम नेपालीले भोगिरहेको समस्या समाधान गर्न संसदमा कानुन बनेन वा बनेको कानुनको कार्वान्वयन भएन वा बिधिको शासनको प्रत्याभुति भएन वा सुशासनको अनुभुति हुन सकेन भने आबश्यकता अनुुसार संसद अबरद्ध पनि गर्नु पर्दछ । ताकि आम जनतालाई प्रत्यक्षरुपले अनुभुति होस् कि हाम्रो जनजीविका र समस्यासंग प्रत्यक्ष जोडिएको बिषयमा संसद अबरुद्ध भई रहेको छ । यस्तो मुद्दामा आम जनताको भावनात्मक साथ, सहयोग र समर्थन पाईन्छ ।
(यो लेख रचना लेखकको नीजि बिचार हो । )